Anuz Kulung's Blog: अनलाईन प्रोगामहरुमा हाई रिटर्न मनि दिनेहरु अधिकांश कम्पनीहरु फेक पनि हुन्छन् ।
इन्टरनेट जब त्यस्तो जब हो । जोकोहि मान्छेले खाँसै पत्याउन गाह्रो मान्छ । यहाँबाट कसरी आम्दानी गर्न सकिन्छ त ? भन्ने बिषयमा मान्छेहरु अनबिज्ञ पनि छन् ।
नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने अनलाइन जबलाई यति धेरै नराम्रो बिकृति फैलाएर चलाईरहेका छन् । तिनीहरुको चर्चा गरेर यो लेखलाई तपाईहरु माझ फैलाउन चाहन्न । जे भए पनि नेपालमा अनलाइन जबलाई ब्यवस्थित गर्ने कुनै त्यस्तो आधिकारिक कानुन तयार भएको छैन । किनकी नेपाली सभासदहरुलाई नै कतिपय रुपमा कम्प्युटरको ज्ञान भएको ब्यक्ति हुदैन । यिनिहरुले कसरी बनाउन सक्छ अनलाइन जबको एउटा आधार ?
त्यहि भएर कतिपय नेपालीहरुले यसलाई गलत हल्ला, आश्वशान, लोभ, लालच देखाएर यो ब्यवसायलाई फैलाइरहेका छन् । हरेक ब्यक्तिहरुबाट पैसा उठाउने र कम्पनी भागिदिने खालको प्रबृति भएर अनलाइन जब कतिपय नेपालीहरुको लागि बिश्वासको घेराभित्र परिरहेका छैनन् ।
यस्तै गरी अनलाईन जबभित्र बिश्वास गरेर पस्ने साथीहरु पनि कतिपय अवस्थामा वेबसाइट भाइरसबाट बञ्चित भईरहेका छन् । जस्तो कि जसरी कतिपय नेपाली साथीहरुले गलत ढंगबाट प्रचार प्रसार गरेर अनलाइनको प्रोगाम चलाईरहेका हुन्छन् त्यसरी नै वेबसाइटहरु, इन्टरनेट जब दिने कम्पनीहरु पनि त्यस्तै गलत लोभ लालच देखाएर प्रचार प्रसार गरिरहेका हुन्छन् । त्यसमा यति उति कमाई हुन्छ भनेर लोभ देखाएर त्यसभित्र प्याकेज फि यति तिर्नुपर्छ भन्दै डलर तिराउन कर गरिरहेका हुन्छ । उक्त लोभलाई ख्याल गर्दै कतिपय साथीहरु खुरु खुरु डलर तिरेर आफ्नो पैसाको नाश गरिरहेका हुन्छन् । कतिपय कम्पनीहरुले पैसा उठाउने र भाग्दिने खालको हुन्छ भने कतिपय कम्पनीहरुलाई आफ्नो बिजनेशलाई धान्न नसकेर कम्पनी नै खारेज गरी कम्पनीको मालिक भाग्दिने खालको काम गर्दछ ।
आफ्नो बिजनेशलाई धान्न अथबा थाम्नको निमित्त ९क्गकतबष्लबदभि० एउटा राम्रो बिजनेश कन्सेप्टले इन्टरनेट ब्यापार चलाउने कम्पनीहरु थोरै भए पनि छन् । तिनीहरुले राम्रो ब्यापार गरि पनि रहेको छ । तिनीहरुले राम्रो प्रचार प्रसार पनि बिश्वभरि फैलाईरहेका छन् । तिनीहरुले बिश्वभरि इन्टरनेटमार्फत राम्रो सञ्जाल पनि फैलाईरहेका छन् । तिनीहरुले ठिक समयमा आम्दानी पनि दिइएरहेका छन् । तिनीहरुले राम्रो पेमेन्ट कम्पनीहरुसँग सहकार्य गरेर आफ्नो बिजनेशलाई अगाडि धानीरहेका छन् ।
जस्तै फेसबुक कम्पनी इन्टरनेट बिजनेशकै पहिलो नम्बरमा आउछ । योबेला उसको राम्रो बिजनेश चलिरहेको छ । उसले बिश्वभरि नै आफ्नो फेसबुक सञ्जाल फैलाएका छन् । उसले अधिकांश सबै कम्पनीलाई समेटेर आफ्नो बिजनेश पहिलो नम्बरमा ल्याएको छ । बिज्ञापनबाट यो कम्पनीको डलर कति हुन्छ भन्ने कुरा त तपाईहरुले समाचारहरुमा पनि सुनि नै राख्नु भएको छ ।
फेसबुक कम्पनी पछि गुगल, याहु, हटमेल, एओल यिनीहरु पनि त्यसपछिका बिजनेश कम्पनीमा राम्रै ठहरिन्छ । यिनिहरुले पनि बिज्ञापनमार्फत राम्रै आम्दानी गरिरहेका छन् ।
Posted by Pokhara News at 10:11 AM
Anuj G, chetanamulak lekhko lagi thanks , yo kura Hami sabaile jannai parne kura ho. Bises gari yuwaharule.
Thankyou!! Saniwachha Ji